Magaalada Dnipro (hore Dnipropetrovsk) ama Dnepr (Ruush) waxaa ku taal River Dnieper (Dnepr ama Dnipro) Bariga iyo Bartamaha Ukraine , oo ku nool ah 1 million (magaalada saddexaad ee dalka by dadka).
Large iyo qurux, waa magaalada ugu weyn ee Bariga iyo Bartamaha Ukraine.
Dnipro waa magaalo firfircoon oo noole.
Magaaladii waa la yaab leh oo doog ah ku teedsan webiga ballaaran oo qunyar socda Dnieper (Dnepr ee Ruush, Dnipro ee Ukraine) oo uu leeyahay ay godoon cajiib ah, kaguuraya dheer iyo firdows waasac.
Waxaa sidoo kale waa waaweyn xarunta of warshadaha-technology sare, waxbarashada, mashiinka-u-dhiska, metallurgy iyo ganacsiga. Magaaladii waa la ma aha oo kaliya caan ku tahay warshadaha ganacsi, laakiin sidoo kale hills ay cagaaran iyo taariikh qoto dheer.
The jir dejinta qalcaddayda ayaa jiray tan iyo bartamihii qarnigii 16aad. Magaalada cusub ee la aasaasay 1776 by Prince Ruushka, Potemkin ay amar ku Catherine II, Empress ee Empire Ruush iyo la odhan jiray Yekaterinoslav (Ekaterinoslav) ka 1776 si ay u 1926. Inta lagu guda jiro 1918 magaca magaalada ayaa ahaa Sicheslav (The ka Nasahanyahay, waayo Sich '/ Fortress of Cossacks).
Dnipro (Dnipropetrovsk) ayaa xarunta ugu weyn ee ganacsiga birta ah tan iyo bilowgii qarnigii 20aad ilaa hadiyaddii. Waxa kale oo badan in industry machinebuilding iyo hooyinka spacebuilding tan iyo 1950.